La-taliyayaasha Warbaahinta ee Cusub - Raadin, Bulsho, Video iyo Mobile
Hagayaasha Suuqgeynta… khaldan .. La-taliyayaasha
Sabtida, Juun 3, 2010 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Douglas Karr
Markii aan bilaabay DK New Media, mid ka mid ah go'aamada la gaadhay ayaa runtii ahayd sida loo calaamadeeyo shirkadda. Markaan ka fekerayo suuqgeynta iyo isbeddelkeeda, waxaan inta badan isbarbar dhigaa kirishbooy iyo heesta. La taliye ahaan, waxaan u baahanahay inaan noqdo sida kirishboonka oo kale, caawinta isku dhafka warbaahinada kala duwan oo aan uga faa'iideysto inay ku garaacaan qoraalada saxda ah waqtiyada saxda ah, si istiraatiijiyaddu ay si buuxda u rumowdo.
Maan rabin da'da naftayda anigoo isku magacaabaya a la taliyaha suuq geynta. Ma aanan dooneyn inaan isku koobo naftayda anigoo ku baaqaya a lataliyaha raadinta or la taliyaha arrimaha bulshada. Taasi waxay lamid tahay inaad sheegto inaad tahay violinist, khayaaliiste, ama garaacis. Saas ma aha, waxaan doonayay in aan naftayda si cad u asteeyaan.
Saxaafadda cusub macnaheedu maahan inaan iska indhatirayo warbaahintii hore, mana i xadideyso mustaqbalka. Had iyo jeer waxaa jiri doona wax cusub. La-talinta cusub ee warbaahinta waxaa ku jiri kara raadinta, bulshada, fiidiyowga, moobilka… ama wax kasta oo ka soo dhaca dhuunta. Taas macnaheedu maaha inaan isku dhiirrigelinayo naftayda khabiir ku ah dhammaan goobahaas. Waxaan horeyba ula shaqeeyey shirkadaha iyo wakaaladaha bahwadaagta la ah mowduucyadaas.
Maaddaama aan ahay lataliye xagga warbaahinta ah, waxay dejineysaa rajo aan ku caawin karo wax kasta oo warbaahinta… oo aan ku barto macaamiishayda horumarkii ugu dambeeyay ee warfaafinta. Oo waxaan isku dayaa inaan wax ka barto oo aan ku dhiso khibrad dhammaan isbeddellada cusub. Waqti ka waqti, waxaan cadeynayaa inaan do la tashiga baraha bulshada ama la tashiga raadinta… laakiin iskuma tilmaamo naftayda meelahaas oo keliya.
Hoggaamiyeyaashu daruuri maahan inay muusikiisteyaal khabiir ku ah hal qalab oo keliya; si kastaba ha noqotee, waxay si buuxda u fahmeen sida looga faa'iideysto qalab kasta, dhammaantood u wada shaqeeyaan, oo u sameeyaan muusig qurux badan. Kani waa abaabulka suuq geynta.
Aad ayey u xun tahay annagu iskuma aannaan wicin hoggaamiyeyaasha suuqgeynta!
Waa tan sameynta muusikada suuqgeynta qurxoon!
Tags: dheelitirkakaarila taliyaha suuq geyntala talinta suuq geyntaabaabulka suuq geyntaMusicqalabka muusikada
WordPress: Sida Loo Sameeyo Fiidyo Baraha Fiidmeedka
Sidee iyo Maxaa Loo Qoraa Buug